နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ရောဂါ - Hello Sayarwon - Page 1 of 1
နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ရောဂါဆိုတာ လေပြွန်တွေမှာ နာတာရှည်ထိခိုက်မှုတွေကြောင့် ရောင်ရမ်းပြီး ချွဲတွေထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိဖို့ ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည် လေပြွန်ရောင် ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့သူများ
နာတာရှည် လေပြွန်ရောင် ရောဂါ (Chronic bronchitis) ဆိုတာ နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ (COPD)ရဲ့ ရောဂါအခွဲတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို သိထားရင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သလို ကိုယ်က ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့သူလားဆိုတာကိုလည်း ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ခြင်းရဲ့ သဘောသဘာဝ ဘာတွေက ဖြစ်စေတာလဲဆိုတာကို မပြောခင် ရောဂါရဲ့ သဘောသဘာဝကို အရင်ပြောပြပါ့မယ်။ ဒါမှ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ ရမှာပါ။ နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်တဲ့ ရောဂါမှာ လေပြွန်နံရံတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခဏခဏ ထိခိုက်လာတဲ့အတွက် ရောင်ရမ်းလာပါတယ်။ ဒါကလည်း တစ်ခါ နှစ်ခါ မဟုတ်ပါဘူး။ နာတာရှည်ဆိုတော့ ကြာလာတဲ့အခါ လေပြွန်တွေ ပျက်စီးလာပါတယ်။ လေပြွန်တွေ ရောင်ရမ်းပြီး ချွဲတွေ ထွက်လာတဲ့အတွက် အဆုတ်ထဲကို လေဝင်ဖို့ ခက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အသက်ရှူရခက်ပြီး မောလာပါတယ်။ […]
နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ
နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ရောဂါ နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
နာမည်ကျော် ကာတွန်းပညာရှင်ကြီး ဝေါ့တ် ဒစ်စနေက ပြောဖူးတယ် “ခင်ဗျား စူးစမ်းစပ်စုချင်စိတ်ဖြစ်လာရင် စိတ်ဝင်စားစရာ အရာတွေအများကြီး ရှာတွေ့လိမ့်မယ်” တဲ့။ ကမ္ဘာကျော်ဆိုစကားတစ်ခုရယ်ပါ။ များသောအားဖြင့် လူအတော်များများမှာ စပ်စုတတ်တဲ့ သဘာဝရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများက ကိုယ့်ကို စပ်စုရင်တော့ မကြိုက်တတ်ကြပါဘူး။ စပ်စုတတ်တဲ့ အလေ့အထကို ယျေဘုယျအားဖြင့် နှစ်လိုဖွယ်ရာ အမူအကျင့်လို့ မမြင်တတ်ကြပါဘူး။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်လေ။ စပ်စုခံရတယ်ဆိုတာ သိပ်တော့ ကောင်းလှတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ဖက်လူက ပြောချင်တာ၊ မပြောချင်တာ စသဖြင့် စိတ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိနေနိုင်တာကိုး။ ဒါပေမယ့် စပ်စုတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ ဒီစိတ်လေးကို အပြစ်လို့ မမြင်ကြပါနဲ့။ စပ်စုတတ်တာက လူအမြင်ကပ်စရာချည်း၊ ဆိုးနေတာချည်းတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကောင်းတဲ့ အကျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ စပ်စုတတ်တဲ့သူတွေရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ယျေဘုယျအားဖြင့် အချက် ၁၀ ချက်ရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာပြောပြပေးမယ်နော်။ စပ်စုစိန်တို့ရဲ့ အားသာချက်များ စူးစမ်းစိတ်၊ စပ်စုချင်စိတ်ဟာ […]
ကဲ ခုဆို နွေရာသီ ရောက်ပြီ။ ကျောင်း ပိတ်ရက်တွေ၊ ရုံး ပိတ်ရက်တွေ၊ နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်တွေ တန်းစီပြီးလာပါတော့မယ်။ ပုံမှန်ကာလတွေမှာဆို ဒီအချိန်ဟာ ခရီးအများဆုံး သွားကြတဲ့ရာသီတွေထဲက တစ်ခုပေါ့။ ခုချိန်မှာ COVID-19 ကြောင့် ခရီးသွားလာဖို့ တချို့တွေက စိုးရိမ်နေကြပေမယ့် ပြည်တွင်းကို ဒီရောဂါဆိုး မရောက်သေးတာနဲ့ ရန်ကုန်လိုမြို့ပေါ်ဒေသတွေမှာ နေတာက ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေပိုများတယ်လို့ ယုံကြည်နေကြသူတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ ခုလို ကာလမျိုးမှာ နယ်တွေမှာ စတေးရှောင်ပြီး အပန်းဖြေခရီးလေးတွေ ထွက်ဖို့ ပိုစဉ်းစားနေကြပါတယ်တဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ တွေးပုံ မြင်ပုံခြင်း ဘယ်တူပါ့မလဲလေနော်။ ကောင်းပြီ။ ခရီးသွားမယ်လို့ တွေးထားတယ်ဆိုပါတော့။ ဘယ်လိုသွားကြမလဲ? ဘယ်သူတွေနဲ့သွားကြမလဲ? ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကိုယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ခရီးသွားတာဟာ ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းမွန်တဲ့ ကိစ္စလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ တချို့ကတော့ တွေးတတ်ကြပါတယ်။ ချစ်ရသူနဲ့ […]
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 20/06/2020
ချစ်ရသူနဲ့ ကွေကွင်းရတဲ့အခါ၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်တွေ ကြုံလာရတဲ့အခါ၊ မိသားစုဝင်တွေ ကိုယ်ချစ်ချင်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရသူတွေ ဆုံးပါးသွားတဲ့အခါ၊ ပြင်းထန်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုတွေများလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ လူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးဟာ ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကို အသည်းကွဲတယ်လို့ ယျေဘုယျအားဖြင့် ခေါ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာဟာ ချစ်သူရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲလို့ ခံစားရရုံသက်သက်ဝေဒနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆို အသည်းကွဲတာ ရောဂါတစ်ခုလား? အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာက ယာယီနှလုံးရောဂါလက္ခဏာ တစ်မျိုးပါ။ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားနာကျင်ခံစားရမှုတွေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ Broken Heart Syndrome လို့ လူသိများပေမယ့် Stress Cardiomyopathy ၊ Takotsubo Cardiomyopathy လို့လည်း ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့် နှလုံးအတွင် သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှု လျော့နည်းပြီး နှလုံးကြွက်သားတွေ အားနည်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါလက္ခဏာ […]
COPD ခေါ် နာတာရှည် လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ အဆုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ နှစ်နဲ့ချီပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရောဂါအခြေအနေဆိုးရွားလာမှသာ သတိပြုမိကြတာများပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေက တသမတ်တည်းရှိမနေဘဲ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် ဖြစ်နေနိုင်ပြီး ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာလည်း ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ COPD လူနာတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးခြင်း တကယ်တော့ ချောင်းဆိုးခြင်းဆိုတာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ အဆုတ်မှာရှိတဲ့ ချွဲသလိပ်၊ အရည်တွေနဲ့ အခြားအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေကို ခန္ဓာကိုယ်က ရှင်းထုတ်ပစ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ချွဲသလိပ်မှာ အရောင်မရှိပေမယ့် COPD ဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ ချွဲသလိပ်ကတော့ အဝါရောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ COPD လူနာတွေဟာ မနက်ပိုင်းမှာ ချောင်းပိုဆိုးလေ့ရှိပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ချိန်တွေမှာလည်း ပိုဆိုးတတ်တယ်။ အအေးမိဝေဒနာ၊ တုပ်ကွေးစတဲ့ ဖျားနာမှုလက္ခဏာတွေ မရှိပေမယ့်လည်း […]
Sinusitis (ထိပ်ကပ်နာရောဂါ) ကဘာလဲ။ ထိပ်ကပ်နာရောဂါဆိုသည်မှာ လူဦးခေါင်းခွံတွင် နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လေလမ်းကြောင်း/နှာခေါင်းလှိုဏ် (Sinus) ပိတ်ဆို့ရာကနေ တစ်ခု(သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ နှာခေါင်းလှိုဏ် တွေ ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ကပ်နာရောဂါသည် ရုတ်တရက်ဖြစ်နိုင်ပြီး အချိန်တို ၄ ပတ် လောက်ပဲဖြစ်ရင် ရုတ်တရက်လတ်တလော ထိပ်ကပ်နာလို့ခေါ်တယ်။ ၃ လ လောက်ကြာပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်နေရင်တော့ နာတာရှည်ထိပ်ကပ်နာလို့ခေါ်တယ်။ Sinusitis (ထိပ်ကပ်နာရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ ဒီရောဂါဟာ အဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံ သိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ရောဂါ ကျွမ်းကျင်သူ